नेपाल आज | प्रेम र याैनिकतामा मान्छेभन्दा पनि तेज वाँदर (भिडियाे)
प्रेम र याैनिकतामा मान्छेभन्दा पनि तेज वाँदर (भिडियाे)
सोमबार, ०३ जेठ २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
एजेन्सी । अफ्रिकाको साभना जंगलमा यस्ता वांदरहरुको बिचरण छ जो ठ्याक्कै मान्छे जस्तै व्यवहार गर्दछन् ।
त्यो मध्ये बोनोबो एक प्रजाति हो । यो वांदरको जातिका बांदरले एउटैमात्र सेक्स पार्टनर बनाई एकअर्कासंग संभोग गर्ने गर्दछन् । एक नरनारी बह्माचारी भन्ने उखान बोनोबो बांधरको हकमा ठ्याक्कै मेल खान्छ । यत्ति मात्र कहां हो र ? बोनोबोको यौन कौशलपनि बबाल छ ।
यौन सम्पर्क अघि एक अर्कालाई सुम्सुम्याउने, अंगालो हाल्ने तथा चुम्वन साट्ने गर्दछन् । बिवाह गर्ने उमेर पुगेको वयस्क बोनोबो जोडी लामो समयसम्म झुण्डबाट अलग्गिएर जंगलमा एक्लै बिचरण गर्दछन ।
चलनचल्तीको भाषामा भन्दा डेटिङजस्तो लाग्ने यो विचरणमा जोडीले एकअर्काको निकै ख्याल राख्ने गर्दछदन् । एकअर्कालाई पूर्णरुपमा बुझिसकेपछिमात्रै यौन सम्र्पक हुने गर्दछ । मान्छे यौन उन्मादमा चिन्दै नचिनेकासंगपनि ग्वाम्मै अंकमाल गर्छन्, बोनोबोहरु गर्दैनन् ।
अधिकांस वांदरहरु हात र खुट्टाले हिड्दछन् । तर, यो वांदर धेरैबेर सम्म पछाडिका दुई खुट्टाले मात्र हिड्दछ । विशेष गरी एक अर्कालाई प्रभाव पार्न र जोखिमपूर्ण बेलामा बोनोबो उभिने र कराउने गर्दछ ।
हुनत यो प्राणी अत्यन्त दयावान र शान्त हुन्छ । महिला बोनोबोको सुरक्षामा विशेष ख्याल गर्दछन् । स्कटिङ्ग झैं गरी पुरुष बानोबोले सुरक्षा दिएका हुन्छन् । यो वांदर परिवारमा मिलेर बस्ने गर्छ ।
एक अर्कालाई पर्दा सहयोग गर्ने, खानेकुराहरु बांडेर खाने गर्दछन् । यो प्रजातिको बांदरले भान्छासमेत बनाएको हुन्छ । अगेनो बनाउने र खानेकुरा पकाएरसमेत खाने गर्दछन् । भाले बोनोबो खाना खोज्न जाने र पोथी बोनोबो बच्चा स्याहर गरेर बासस्थानमै रहने गर्दछन् । तपाईलाई यो बांदर प्रेम र सेक्सका बारेमा मान्छे भन्दा तेज लागेन त ?
हेर्नुहोस बोनाबोले आगो बालेकोभिडियो:
[embed] [/embed] [embed] [/embed]